Monday March 08, 2021 - 10:28:00 in Wararka by Xarunta Dhexe
Hay'adda taraafikada ayaa ku dhawaaqday inay bilawday adeegsiga kaamirooyinka ilaalada xarumaha imtixaanka Teoriga , kadib markii ay soo bateen kiisaska qishka imtixaanada. Waxay sheegtay in kaamirooyinka ilaalada ay soo jiidan karaan si ay u mu
Hay'adda taraafikada ayaa ku dhawaaqday inay bilawday adeegsiga kaamirooyinka ilaalada xarumaha imtixaanka Teoriga , kadib markii ay soo bateen kiisaska qishka imtixaanada. Waxay sheegtay in kaamirooyinka ilaalada ay soo jiidan karaan si ay u muujiyaan qalabka farsamada ee ay qariyaan kuwa isku dayaya inay khiyaaneeyaan, sida kaamirooyinka yaryar ee lagu rakibo dharka dhexdiisa iyo kuwa kale. Sida uu soo xigtay TT shalay.
Kiisaska khayaanada ee tijaabooyinka teori ee qalabka casriga ah ayaa kordhay muddooyinkan dambe, gaar ahaan Södertälje. Halkasi oo shalay, laba qof lagu qabtay kuwaas oo isticmaalaya kamarad qarsoon si ay su’aalo ugu gudbiyaan qof banaanka jooga oo ay jawaabo uga helaan samaacadaha. Waaxda taraafikada ayaa tuhunsan in khiyaanada ay wado shirkad siisa qalabka lacag gaareysa 5,000 ilaa 20,000 karoon.
Sanadkii la soo dhaafay, 16 isku day khiyaamo oo loo adeegsaday qalab casri ah ayaa loo gudbiyay booliska Södertälje. Halka tirada isku dayga khayaanada ee Sweden oo dhan ay gaartay 185 kiis.
Agaasimaha amaanka taraafikada Thomas Truning ayaa sheegay in tirada kiisaska aan la ogaan ama la soo sheegin ay badan karaan.
Laga soo bilaabo Maarso 1, 2020, qof kasta oo qaata imtixaanka aragtida ah waa inuusan khiyaameyn doonin ama uusan adeegsan doonin wax farsamo ah, taas oo macnaheedu yahay in booliiska lagu wargelin karo khiyaano inay tahay dambi ah soo gudbinta been abuur cadeyn, dambi u horseedi kara ganaax. Ama xabsi ilaa lix bilood ah.